बिहीवार, ३ माघ, २०७५ (Thu, 17 January, 2019)
Date : 14 Oct 2015
सेनाको पेट्रोल पम्पमा लापरवाहीपूर्ण इन्धन बितरण
काठमाडौं, असोज २७ । राजधानीको भद्रकालीमा नेपाली सेनाले सञ्चालन गरेको पेट्रोल पम्पमा लापरवाहीपूर्वक इन्धन विरण गरेको छ । रिपुमर्दिनी पेट्रोल पम्पका व्यवस्थापकले दुई दिनदेखि लाइनमा रहेका
बीरगन्ज बाहेकका नाका खुकुलो, भारतको नियत अझै अस्पष्ट
काठमाडौं, असोज २७ । नयाँ सरकारले नेपालमाथिको अघोषित नाकाबन्दी अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने तयारी गरेपछि भारतले आंशिक रुपमा केही नाकाहरु सहज बनाए पनि मुख्य व्यापारिक केन्द्रमा नाकाबन्दी अझै
आजबाट एनआरएन सम्मेलन सुरु हुँदै, १५ सय सहभागी हुँदै, राजधानी एनआरएनमय बन्यो
काठमाडौं, असोज २७ । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को सातांै साधारण सभा एवम् विश्व सम्मेलन बुधबारदेखि काठमाडौंमा सुरु भएको छ । ‘एनआरएनए, पुनर्निर्माणको सच्चा साझेदार’ भन्ने
शक्तिकेन्द्र गुहार्दै कांग्रेस, राष्ट्रपति फर्काउन प्रयास
काठमाडौं, असोज २७ । भारतीय दवावमा आफैले तीन दलीय सहमति उल्लंघन गरेको नेपाली कांग्रेसभित्र भाँडभैलो मच्चिएको छ भने सहमति तोडिन पुग्दा राष्ट्रपतिसहित सबै पद गुमाउने खतरा
Date : 13 Oct 2015
मुलुकको दोस्रो राष्ट्रपतिमा नेकपा एमालेका सुबास नेम्वाङ र विद्या भण्डारीको चर्चा
काठमाडौं, असोज २६ । मुलुकको दोस्रो राष्ट्रपतिमा नेकपा एमालेको भागमा जाने सम्भावना बढेको छ । सत्ता साझेदार दोस्रो ठूलो एमाओवादीले उपराष्ट्रपति र सभामुख मात्रै लिने जानकारी
एमालेसँगको छलफलपछि मात्रै मन्त्रीको टुंगो : एमाओवादी
काठमाडौं, असोज २६ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग छलफल गरेपछि मात्रै एकीकृत नेकपा (माओवादी)ले सरकारमा सहभागी गराउने मन्त्रीको टुङ्गो लगाउने भएको छ । एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको
मधेसी दलहरुसँग सहमति हुन्छ: प्रधानमन्त्री
काठमाडौं, असोज २६ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दसैं अघि नै आन्दोलनरत मधेसी दलहरुसँग वार्ता गरी सहमति कायम गर्ने बताएका छन् । प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएपछि मंगलबार राष्ट्रपति
"मुलुकको समस्या सामधान वर्तमान सरकार सक्षम छ"
काठमाडौं, असोज २६ । एमाले नेता माधवकुमार नेपालले मुलुको समस्या सामधान गर्न वर्तमान सरकार सक्षम हुने बताएका छन् । मंगलबार राजधानीमा भएको एक कार्यक्रममा उनले जनताले
काठमाडौंमा एनआरएनए सम्मेलन असोज ३० सम्म, नेतृत्वका लागि तीन प्रत्यासी
काठमाडौं, असोज २६ । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएन) को सातौँ अधिवेशन तथा विश्व सम्मेलन आगामी असोज २७ देखि ३० सम्म काठमाडौँमा हुने भएको छ । उक्त
नेपालीहरुको चाड बडा दसैं सुरु, घरघरमा जमरा राखिँदै
काठमाडौं, असोज २६ । यस वर्षको बडा दसैं आजबाट सुरु भएको छ । नवरात्रको पहिलो दिन आज घरघरमा देवी दुर्गाको प्रतीमा स्थापना गरी घटस्थापना गरिँदै छ
इन्धन समस्याबारे भारतसँग वार्ता गर्ने जिम्मेवारी थापालाई, २०४५ सालदेखिको हिसाब-किताब गर्न सक्लान ?
काठमाडौं, असोज २६ । नयाँ सरकार गठनसँगै भारतसँग वार्ता गर्ने जिम्मेवारी पाएका नवनियुक्त उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्र मन्त्री कमल थापाले पाएका छन् । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषदको पहिलो
Date : 12 Oct 2015
प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा जनताको नाममा शपथ, नाकाबन्दीको समाधान पहिलो प्राथमिकतामा
काठमाडौं, असोज २५ । अनेकांैं षडयन्त्र बीच नयाँ संविधान जारी भएपछिको पहिलो प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएका एमालेका अध्यक्ष खड्ग प्रसाद ओलीले सोमबार जनताको नाममा शपथ ग्रहण गरेका
हतारमा संविधान संशोधन नगरौं : बिजुक्छे
भक्तपुर, असोज २५ । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेले कसैको दबाबमा आएर हतारमा संविधान संशोधन गर्न नहुने बताएका छन् । सोमबार आयोजना गरेको साक्षात्कार
प्रधानमन्त्री निवासमा प्रचण्ड सहितका नेताहरूको भेटवार्ता
भक्तपुर, असोज २५ । भक्तपुरको बालकोटस्थित प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निवासमा सोमबार नेकपा एमालेका नेताहरू र एमाओवादीका नेताहरूबीच सरकार गठनबारे छलफल भएको छ । सरकार गठनबारे प्रधानमन्त्री
चट्याङले दुईको मृत्यु, सात घाइते
प्यूठान, असोज २५ । प्यूठानमा चट्याङ लागेर दुई जनाको मृत्यु भएको छ भने सात जना घाइते भएका छन् । उत्तरी प्यूठानका छुट्टाछुट्टै दुई गाविसमा सोमबार राती
संघीयतामा हेरफेर सहित संविधान संशोधन हुन्छ : उपप्रधानमन्त्री गच्छदार
काठमाडौं, असोज २५ । नवनियुक्त उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारले तराई–मधेसमा जारी आन्दोलनका माग सम्बोधनका लागि सङ्घीयताको संरचनामा हेरफेर सहित संविधान संशोधन गरिने बताएका छन् । सोमबार राष्ट्रपति भवन
कोइरालाले बालुवाटार छाडेर शशाङ्कको घरमा
काठमाडौं, असोज २५ । नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्व प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले सोमबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटार छाडेका छन् । वि.सं. २०७० माघ २७ गते मुलुकको
नयाँ सरकारले सम्पुर्ण वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको हक हितको लागि काम गर्ने व्यवसायीहरुको विश्वास
काठमाडौं, असोज २५ । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको नयाँ सरकारले सम्पुर्ण व्यवसायीको हक हितको लागि काम गर्ने व्यवसायीहरुले विश्वास लिएका छन् । वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुले देशले
नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्री ओलीको सपथ सोमबार दिउँसो १ बजे
काठमाडौं, असोज २४ । नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सोमबार पद तथा गोपनियताको सपथ ग्रहण गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ । राष्ट्रपति निवास शीतल निवासमा सोमबार
बहुदलीय प्रजातन्त्रमा हारजित सामान्य कुरा हो, नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्री ओलीलाई पूरा सहयोग हुन्छ : सभापति कोइराला
काठमाडौ, असोज २४ । नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइरालाले नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई आफ्नो तर्फबाट पूर्ण सहयोग हुने बताए । व्यवस्थापिका–संसदमा आज प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन भएलगत्तै बाहिरिने
शीर्ष नेताहरुद्वारा सहकार्य मै जोड
काठमाडौं, असोज २४ । प्रधानमन्त्री पदमा एमाले अध्यक्ष केपी ओली निर्वाचित भएपछि प्रमुख दलका नेताहरुले संवाद र सहकार्यबाटै अघि बढ्ने दृढता व्यक्त गरेका छन् । निवर्तमान प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएलगत्तै ओलीलाई मोदीको बधाई
काठमाडौं, असोज २४ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बधाई र सफल कार्यकालको शुभकामना दिएका छन् । प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भए लगत्तै पार्टी कार्यालय
Date : 10 Oct 2015
विकल्प ज्ञान तथा विकास केन्द्रद्वारा एक सय ३० बालबालिकालाई सहयोग
काठमाडौं, असोज २३ । सुनौलो भविष्यका कर्णधार बालबालिकाहरु शिक्षाको अधिकारबाट बञ्चित हुन नपरोस भन्ने उद्देश्यले विकल्प ज्ञान तथा विकास केन्द्रले चितवनको चण्डीभञ्ज्याङ गाविसस्थित राष्ट्रिय प्राथमिक विद्यालयका
दशैं अघि तातोपानी नाका सञ्चालन नहुने
काठमाडौं, असोज २३ । भारतले अघोषित नाकाबन्दी लगाइरहेका बेला उत्तरी छिमेकी चीनले समेत अवरुद्ध नाका खोल्न अनिच्छुक देखिएको छ । चीनिया पक्षले तातोपानी नाका सञ्चालन गर्ने लगायतका
प्रधानमन्त्रीमा उम्मेदवारी दर्ता गरिँदै
काठमाडौं, असोज २३ । प्रधानमन्त्री निर्वाचनका लागि आज दलहरूले उम्मेदवारी दर्ता गर्ने भएका छन् । बहुमतीय प्रक्रिया अनुसार नयाँ सरकार बनाउनका लागि आज मनोनयन दर्ता गरिनेछ
नाकाबाट गाडीहरु धमाधम नेपाल भित्रिदैं
काठमाडौं, असोज २३ । भारतको अघोषित नाकावन्दीका कारण मुलुकका मूख्य भन्सार नाकाहरु अझै ठप्प छन् । केही भन्सार नाकाहरुबाट भने थोरै मात्रामा मालसामान र पेट्रोलिय पदार्थका
Date : 09 Oct 2015
संसार हल्लाउनेले भारत हल्लाउँदैन र ?
तपाईंले मेरो देशलाई नाकाबन्दी लगाएको कारण आज मेरो चित्ता दुखेको छ, मन फाटेको छ र आँसु झरेको छ । मोदीलाई जम्मु काश्मिरबाट एक भारतिय गोर्खा सैनिकको
मधेस आन्दोलन साम्प्रदायिक हुन थालेको भन्दै चुरे भावरद्धारा शान्तिपूर्ण प्रतिकारको घोषणा
काठमाडौ, असोज २२ । दुई महिनादेखि जारी मधेस आन्दोलन साम्प्रदायिकतातर्फ उन्मुख हुन थालेको दावी गर्दै चुरे भावर राष्ट्रिय एकता पार्टी नेपालले शान्तिपूर्ण प्रतिकारात्मक आन्दोलनको घोषणा गरेको
नयाँ प्रधानमन्त्रीको चुनाव असोज २४ गते
काठमाडौं, असोज २२ । असोज २४ गते संसदले नयाँ प्रधानमन्त्रीको चयन गर्ने भएको छ । प्रधानमन्त्री चयनका लागि सभामुख सुवास नेम्वाङले असोज २४ गते बिहान ११ बजेका
घटस्थापनादेखि नै बिदा दिने गृहको प्रस्ताव अस्वीकृत
काठमाडौं, असोज २२ । गृह मन्त्रालयले दशैंमा थप बिदा दिने भनि गरेको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद बैठकले अस्वीकृत गरेको छ । शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले घटस्थापनादेखि नै दशैं बिदा
Pages 132 : You are at page 52 of 132
« Prev 1234567 8910 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 Next »